Cheem OEM ahama steel jeestay qaybo warshad Customization iyo alaab | Ouzhan
Ka shaqeynta Lathe waxay inta badan isticmaashaa qalab rogaya si ay u noqoto meertada wareegsan. Daloolinno, dib-u-fiirinno, reamerro, tuubbooyin, dhimashooyinka iyo qalabka kala-goynta ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa lathe-ka si loo helo hawl u dhigma. Lathes-ka waxaa badanaa loo isticmaalaa mashiinnada mashiinnada lagu duubo, saxannada, gacmo-gacmeedyada iyo shaqooyinka kale ee leh dusha wareega. Iyagu waa nooca ugu ballaaran ee loo isticmaalo mashiinka mashiinka lagu farsameeyo ee soo saarista mashiinnada iyo dib u hagaajinta. Ouzhan waxay bixisaa adeegyo habeysan oo loogu talagalay farsameynta birta birta ah ee loo rogo qaybo loogu talagalay macaamiisha qiimaha leh.
OEM ahama qaybo jirsado ahama qalabka mashiinka
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka sameysan birta birta ah waa kaarboon, chromium, nikkel, iyo qaar ka mid ah waxyaabaha isku dhafan sida molybdenum, copper, iyo nitrogen. Waxyaabaha ugu weyn ee alwaaxda ku leh birta birta ah waa Cr (chromium), oo keliya marka waxyaabaha ku jira CR ay gaaraan qiime cayiman, birtu waxay leedahay caabbinta daxalka. Bir daxal laheyn waxay leedahay astaamo aad u fiican sida xoog u gaar ah, iska caabbinta xirashada sare, iska caabinta daxalka ka sarreeya iyo u adkeysiga miridhku. Sidaa darteed, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha, mashiinnada cuntada, warshadaha korontada, warshadaha qalabka guryaha iyo qurxinta guriga, warshadaha dhammeeya. Ka shaqaynta Lathe waa qayb ka mid ah farsamaynta farsamada.
Ouzhan Shiinaha CNC machining Service --- ahama ahama ahama birta farsamo ahama jeestay qaybo processing qalabka
Hore: Qaybo been abuur ah
Xiga: Naxaas shidan
Ahama ahama qaybo ka leexdo ahama proces ...